Ike nke obodo na -enwu site na mmemme mmụta IMEX America
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Ike nke obodo na -enwu site na mmemme mmụta IMEX America
Dị ka Dalai Lama si kwuo: "Enweghị obodo mmadụ, otu mmadụ agaghị adị ndụ." Mkpa obodo na-apụta n'oge mmemme mmụta niile na IMEX America, Nọvemba 9-11, yana nnọkọ na-ekpuchi ike ịkọ akụkọ, ụkpụrụ ọnụ, na ọdịdị mmadụ.
Agụmakwụkwọ efu na -ekpuchi ike ịkọ akụkọ, ụkpụrụ ọnụ na ọdịdị mmadụ.
Onye nta akụkọ Sharad Kharé ga-enye nkuzi maka ịkọ akụkọ na nka amachaghị nke ịge akụkọ.
Sharad ga -eduga ndị sonyere site na mmegharị ajụjụ ọnụ mkparịta ụka na -agba ndị ọzọ ume ịtụle ka akụkọ mmadụ nwere ike isi metụta ihe nketa ha.
Onye odeakụkọ Sharad Kharé maara amamihe nke Dalai Lama nke ọma ma dekọọ ya, yana ụfọdụ nnukwu aha na Hollywood, azụmahịa, na ọdịbendị, dị ka akụkụ nke ọrụ ya dị ka onye na-arụkọ ọrụ na Human Biography. Sharad ga-enye nkuzi maka ịkọ akụkọ na nka amachaghị nke ịge akụkọ. Na nnọkọ nke abụọ, "Gịnị bụ ihe nketa gị?"
Sharad Kharé, ngalaba-guzobere akụkọ ndụ mmadụ
Okwu ụdị TED na-abanye n'ọdịdị mmadụ
Human Biography bụ otu n'ime ọgbakọ atọ na-ekwupụta ụdị TED ngwa ngwa n'oge ngosi ahụ. Okwu ndị a na -etinyere n'akụkụ dị iche iche nke ọdịdị mmadụ. Ezigbo Worldwa bụ nzukọ ahaziri maka inyere ndị otu aka-site na kpakpando egwuregwu ruo ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa-iji mepụta njikọ gbanyesiri mkpọrọgwụ ike ngwa ngwa. Sayensị na-akwado usoro ịkọ akụkọ ha, ndị otu ahụ kọwara na "nchọpụta egosila na ịchọta ezi ebumnuche n'ihe omume gara aga na-ejikọ echiche nke onwe na afọ ojuju dị ukwuu." Isonyere ha bụ ọdụm TLC nke Gian Power guzobere bụ onye hapụrụ ụwa ụlọ ọrụ mgbe ọdachi dakwasịrị ezinụlọ wee wuo obodo. Nsonaazụ bụ otu mba ụwa nke ndị mmadụ dị ịtụnanya - “ọdụm” - ndị na -ekerịta akụkọ ha, ọgụ na mmeri ha iji kwado ma gbaa ndị ọzọ ume. Gian na -akọwa, sị: “A nọ m ozi ime ka ebe ọrụ bụrụ ihe na -akpali mmetụta mmetụta uche, ebe ị tụkwasịrị ndị gbara gị gburugburu obi, ebe ndị otu na -enwe mmetụta dị ka ezinụlọ nke abụọ. Ọ bụghị naanị ihe ziri ezi ịme mana ọ bụ azụmahịa dị mkpa yana njikọta ozugbo na nrụpụta nke onye na azụmaahịa. ”
Isi ihe siri ike nke na -ejikọ obodo ọnụ bụ ụkpụrụ ọnụ - ọ bụghị igwe mmadụ. Nke ahụ bụ dị ka David Allison, onye guzobere Valuegraphics. Ọkachamara n'omume ndị na -azụ ahịa, David bụ onye ndụmọdụ maka ụdị ụwa niile na onye isi na -akwado maka ịtụfu ụdị echiche igwe mmadụ ochie. N'ime nnọkọ Headliner pụrụ iche maka ndị bịaranụ IMEX America, ọ ga-ekpughere nsonaazụ nke ọmụmụ ala na-enyocha ọnụnọ ihe omume na njikọ aka mgbe ọrịa na-efe efe gasịrị. Nke a sochiri usoro ọmụmụ ihe n'ime ụbọchị atọ nke ihe nkiri ahụ gụnyere nke akọwara dị ka “ihe ngosi egwuregwu-egwuregwu, ogbako akụkụ” nke emebere iji jikọta ntụpọ dị n'etiti ụkpụrụ mmadụ bụ isi na echiche ihe omume na-ebute ụkpụrụ ọhụrụ.
Melissa Park onye na -emepụta ihe omume zuru ụwa ọnụ na -ewerekwa ụzọ ọhụrụ iji chegharịa ihe na ọnọdụ azụmahịa gbanwere. Na seminarị ya Ndozigharị ihe omume nke onwe ọ ga -adụ ọdụ ka esi ejikọ ume na mkpali nke ihe omume dị ndụ yana ahụmịhe dị mma yana nchekwa, na -ekerịta nkuzi n'aka ndị na -emepụta egwu.
Agụmakwụkwọ nke bịara n'oge maka ụdị mmụta niile
Carina Bauer, Onye isi oche nke IMEX Group, na -akọwa ihe kpatara isiokwu obodo ji bụrụ oge kwesịrị ekwesị: “Ugbu a amatala ọzọ maka mkpa ọ dị n'iwu obodo. Maka ọtụtụ ndị nọ na ụlọ ọrụ, ihe ngosi a na -anọchite anya ohere pụrụ iche izute ndị ọrụ ibe na ndị mmekọ ha na -ahụbeghị n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2. Anyị chọrọ inye ndị bịaranụ anyị ohere ka ha jikọghachi ma kwalite usoro nka ha, yana ngwaọrụ iji mepụta obodo nke ha na nzukọ na mmemme nke ha. Ya mere, anyị emebela usoro mmụta anyị n'ịchọgharị ihe dị iche iche nke ihe ọ bụ iji wuo ma bụrụ akụkụ nke obodo - na ụfọdụ ndị na -akpali akpali nwere akụkọ dị ịtụnanya ịkọ. "
Mmemme mmụta n'efu na IMEX America na -ebupụta ya na Mọnde Mọnde, nke MPI kwadoro, na 8 Nọvemba wee na -aga n'ihu na usoro ogbako, tebụl isiokwu dị ọkụ na nzukọ ọmụmụ n'ime ụbọchị atọ nke ihe ngosi - haziri maka ilebara ụdị mmụta dị iche iche anya.
IMEX America na-eme November 9-11 na ebe ọhụrụ-Mandalay Bay, Las Vegas-yana Smart Mọnde, nke MPI kwadoro, na Nọvemba 8. Deba aha mmasị. Ebe a.
Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara nhọrọ ụlọ yana pịa akwụkwọ Ebe a.